_OP 19.04 ikozvino yavapo, uye inoshandisa yakanaka GNOME | Linux Vakapindwa muropa
_OP 19.04 ikozvino yavapo, uye inoshandisa yakanaka GNOME
Kunyangwe paine paine angangoita imwechete yapfuura sisitimu, kubva zvino zvichienda mberi tichaona kuburitswa kwakawanda kweanoshanda masisitimu akavakirwa paDisco Dingo, sisitimu inoshanda yatinorangarira yakaburitswa muna Kubvumbi 18. Iyi ndiyo mamiriro e Pop! _OS 19.04, yazvino vhezheni yeiyi inoshanda sisitimu iyo yakavakirwa paUbuntu 19.04 uye inoshandisa iyo GNOME graphical nharaunda. Pakati pemamwe mabasa, Pop! _OS inoshandisa vhezheni yeGNOME nechikumbiro chinotaridzika.
Pakati pezvinhu zvitsva zvinouya pamwe neshanduro nyowani, isu tine nyowani icon theme uye rutsigiro rwezvinhu zvitsva zvemuchina wako, pamwe nekuvandudzwa kwazvino kwesoftware package yako. Iyo nyowani icon theme inovhara ese mashandisiro, mafaera uye maforodha ayo, kunyangwe ivo vachishandisa yavo yavo mufananidzo, anga akavakirwa pane iwo marongero akaiswa neimwe yeanonyanya kushandiswa graphical enharaunda munyika yeLinux. System76, uyo anovandudza Pop! _OS, anoti vanotarisira kushanda pamwe neGNOME chirongwa kuitira kuti mamwe mapurogiramu atsigire dingindira idzva.
Pop! _OS 19.04 inosvika ine nyowani icon theme
Zvimwe zvinhu zvitsva zvinosanganisirwa ndezvi:
Nyowani Slim Mode sarudzo inoderedza hukobvu hwemusoro mabara eiyo application windows kuratidza zvimwe zvirimo.
Rima modhi. Iyi uye nesarudzo yapfuura inogona kumisikidzwa kubva kuChiono menyu mune Zvirongwa.
Sarudzo nyowani yekumisikidza iyo inobvumidza vashandisi kudzoreredza sisitimu yekushandisa pasina kurasikirwa neyako dhata yakachengetwa mune yako wega folda (/ imba) kana vashandisi varipo. Sarudzo yacho haiwanikwe kune vashandisi kukwidziridza.
Linux Kernel 5.0.
Vashandisi vanofarira vanogona kudhawunirodha vhezheni itsva kubva pano. Pari zvino une yazvino vhezheni (19.04) uye iyo LTS (18.04), ese ari muIntel / AMD kana NVIDIA shanduro. Mirayiridzo yekuisa inowanikwa pano. Sechokwadi chinonakidza, iyo Ubuntu boot disk dhizaini yekushandisa kana iyo KDE chishandiso haipe mukana wekugadzira iyo. Iwe unofanirwa kushandisa UNetbootin kana kuipisa kuDVD. Sezvakagara zvichitaurwa, hapana akakwana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » _OP 19.04 ikozvino yavapo, uye inoshandisa yakanaka GNOME
Kuendesa iwo mufananidzo kune pendrive, ingoshandisa iyo Ubuntu disk maneja uye mumatatu epamusoro sarudza kudzoreredza mufananidzo, wobva wasarudza iyo yakatorwa iso uye usb yekushandisa seRarama usb.
GB Studio, chishandiso chekugadzira yako wega mitambo yeGame Boy
chown: izvo zvaunoda kuziva nezve iyi mvumo mirairo